IWestcote Annexe, eWistow kufutshane neYork - I-Airbnb
IWestcote Annexe, eWistow kufutshane neYork
Phantsi sinombuki zindwendwe onguDominique
Ifakwe kwilali entle ekwiikhilomitha ezili-12 ukusuka kwisixeko esiyimbali saseYork. Isitudiyo sethu sokuzenzela ukutya somgangatho wokuqala sineembono ezintle zegadi, ibhedi elingana nenkosi, igumbi lokuhlambela leen-suite, ikhitshi elincinci kunye nokufikelela kwiigadi zabucala. Inkonzo yebhasi eqhelekileyo ukuya eYork naseSelby
I-Westcote Annexe yindawo yokuhlala yesitudiyo enendawo yokupaka yabucala kwaye ibekwe kumgangatho woku-1 ngaphezulu kwegaraji enkulu evalelweyo ngasemva kwendlu yethu entle yasefama yaseGeorgia iqhayisa ngembono yegadi yabucala. Unokufikelela kwiigadi zabucala ezinefenitshala yepatio yangaphandle ukuze uphumle kwaye wonwabele uxolo noxolo ngorhatya lwasehlotyeni. I-Annexe inekhitshi encinci (i-microwave edibeneyo, ifriji, i-sink, iketile, i-toaster kunye nomatshini wekofu we-Nespresso), i-en-suite igumbi lokuhlambela elineshawa yombane, ibhedi yobukhulu benkosi, i-SMART TV, izitulo zebhafu, itafile yokutyela kunye nezitulo. I-hairdryer iyafumaneka kwigumbi.
4.97 · Izimvo eziyi-502
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi502
IWistow yilali encinci ezolileyo enecawe, ipub kunye nentlanzi kunye nevenkile yetshiphu. Sinenkonzo yebhasi eqhelekileyo eya eSelby naseYork emini. Singabonelela ngeenombolo zeteksi kuhambo lwangokuhlwa. Uloliwe kunye nesikhululo sebhasi esikufutshane yiSelby.
ISelby ikumgama oziikhilomitha ezi-2-3 kwaye yidolophu entle yentengiso eneAbbey eyimbali. Kukwakho neenkonzo zikaloliwe kunye nebhasi zokukusa kude ukuba ujonge iNorth Yorkshire nangaphaya! Idolophu yaseSelby inokhetho oluhle lwezinto ezibandakanya: iivenkile, iibhanki, iofisi yeposi, iivenkile ezinkulu, izikhululo zepetroli, iikhefi, ii-pubs, iibhari, iiresityu, indawo yokuqubha yoluntu kunye nejimu, iklabhu ye-bowling, ipaki, ithala leencwadi kunye nebala legalufa. Kuyafaneleka ukujonga iminyhadala ezayo kwiHolo yeDolophu yaseSelby. Usuku lokuthengisa ngoMvulo kwaye kukho imarike yamafama ngoLwesithathu wokuqala wenyanga nganye.
Isixeko esiyimbali saseYork simi malunga neekhilomitha ezili-12 ukusuka apho kukho okuninzi okwenziwa emini nasebusuku!
IWestcote Annexe ibanjiwe kwaye ibekwe ngasemva kwikhaya lethu losapho apho sihlala khona. Sihlala kwindawo kwaye siyafumaneka kulo naluphi na ulwazi okanye uncedo onokulufuna.